राजनीति र नैतिकताका कुरा पढाउने ?
लोक बस्याल, रुपन्देही
नेपाल आज आस्थाको धरोहर ढल्यो भनेर चिन्तित भएर मौन बसेको र अब धरोहर त ढालियो यसको जगलाई नै खलबलाउनु पर्छ भनेर उम्लेको दुई समुहमा बिभाजित छ । यसो किन भनिरहेको छु भने महरा प्रकरणको हुरीमा प्रचण्डको पुत्ला दहन किन हुन्छ ? यो राजनीति हो ,कुटनिती हो ,भाँडनिती के हो? गर्ने, गराउने अझ गौरवका साथ भिडियो शेयर गर्ने मेरा मित्रहरुले एकान्तमा बिवेकपुर्ण रुपले सोच्नु होला ।
म आज मानव मनोविज्ञान र प्रकृतीको बारेमा खोतलिन चाहन्छु । गाउँ घरमा गित सुन्थें ‘भन्छन गाउँ घरमा, बोले हाँसे गई हाली , घर वाली भई हाली ।’ विपरित लिङ्ग प्रतिको आकर्षण स्वभाविक भए पनि हामी मानवले उच्च प्रकारको सम्बन्धमा वसेर प्राकृतिक चाहना पूरा गर्नु पर्छ भनेर विवाहको परिकल्पना सहित यस्तो विवाहको संस्कार बसालिएको हो । त्यसैले विपरित लिङ्ग प्रतिको मानविय सम्बन्ध अन्य प्राणीको भन्दा फरक छ र हुनुपर्छ । तर कुनै मान्छे नजिक हुदैमा पक्का त्यही हो, त्यस्तो कहाँ हुदैन ? पक्का भयो भनेर भन्ने मान्छे धेरै हुन्छन । महरा जीको कुरा पनि त्यस्तै भाको छ । हो होईन त्यो तिनै दुईजनालाई थाहा छ र अलि अलि अनुमान अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीलाई पनि थाहा होला । हामी त्यसै दुई कित्ताबन्दीमा बिभाजित छौं । यो सानो कुरा हो, अनुसन्धानको हिसावमा किनकि बलात्कृत ,खुशिक्रित,दुवै नभए पनि अर्थात जे भए पनि शारीरिक परिक्षणबाट थाहा हुन्छ । त्यसकारण त्यसको बारे के भएको छ पछि खुल्ला नै ।
महरा कान्डमा पूर्ण विस्वस्त हुनेहरुले आफ्नो अनुभवले र कर्मले भएकै हो भन्ने सम्झन्छन अनि भन्छन ‘त्यति भए पछि त पक्का त्यो काम पनि भयो । ’ मलाई लाग्छ विपरित लिङ्ग प्रतिको आकर्षण त्यही एउटा कामको लागि मात्रै जनाउदैन । लामो समयसम्मको र नजिकको सम्बन्ध हुनुमा मात्र पबित्र मित्रता पनि हुन्छ । मलाई थाहा छ धेरै छोरा मान्छेका नजिकमा महिला साथी छन तर तिनीहरु बिच त्यस्ता घ्रिर्णित सम्बन्ध कायम भएका छैनन । पहाडमा कुना काप्चा ,जंगल हुँदैमा एउटा तल्लो स्तरको मान्छेले सोचे जस्तो हुदैन जति कुना काप्चा ,जंगल नभएका शहरमा हुन्छन ।
हामीले गाउँका छोटे नेता देखि केन्द्रसम्मका र पर्वतदेखि काठमाडौं ,चितवन हुदै रुपन्देही सम्मका सबै राजनैतिक पार्टीका नेताहरुको क्रियाकलाप र पार्टीका निर्णयहरु हेरेका र अनुभव गरेका छौं । आफैलाई यस्तै आरोपले घरबार विग्रेकाहरु, स्वीकार गरेर घरबार समालेकाहरु आज नैतिकताका कथा सुनाउदै छन । साठी पैसठ्ठी मुनिका कति नेताका दुई श्रीमती छन ,कति पैसाले चोखिएका छन र कति आज पनि ब्यङ्गकारले भने जस्तै स्पेयर पार्टको रुपमा लिएका छन्।, शन्त नेताले म कुमार छैन, रक्सी बिना बस्न सक्दिन ,अनिता कपाली सँग बस्न मलाई बाध्यता छ भन्दा उनी देशको कुन तहमा थिए , प्रधानमन्त्री ? अनि कुन पार्टीका ? ।।।।।
अरुको ब्यक्तिगत नाम नलेखुँ । यही महरा केशलाई उचाल्नेको चरित्र हामीले नजानकोे कहाँ हो र ? हामी अरुलाई भन्छौ अनि भित्र भित्र आफैले बेठिक मानेको काम आफैं गर्छौं ।
यस टिप्पणी मार्फत म के कुरा स्पष्ट पार्न खोज्दै छु भने गणतन्त्र सगैं भित्रिएको बिकृतीको नाममा गणतन्त्रको सफाय कदापी सैहय हुन सक्दैन । गणतन्त्रको खातिर लड्दा गणतन्त्र बिरोधीले मारेका १७ हजारको साहदतलाई प्रचण्डले मारेको भन्ने अविवेकी मनुष्यलाई मेरो केही भन्नू छैन । तर तिमीहरुले सिक कि हामी बिवेकपूर्ण लडाइको पक्षमा छौं । गणतन्त्रको विरोधी क्रियाकलाप किमार्थ स्वीकार हुदैन ।
गणतन्त्रका लागि लडेका साथीहरुले समेत तिनै प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तीकारीको आवाजमा स्याल हुर्ईया मिसाएको देख्दा र क्रान्तिका नायकलाई गाली गर्न उफ्रेको देख्दा अचम्मित छु । बेठिकलाई ठिक भन्न पर्छ भन्न खोजेको कदापी होईन तर अहिले गल्ती गर्दा उस्को उसको बाबा आमालाई समेत गाली गर्न सुहाउँछ ? महरा कै केशमा पनि महराले त्यही नखरम्याउली प्राप्ति गर्न लडेका त हैनन नी । केश प्रमाणित भयो भने पनि क्षणिक पागलपनले यहाँसम्म पुर्यायो भन्दै यसको सजाय उनैले भोग्छन । म फेरि पनि भन्छ,ु धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरु दिवा सपना देख्न नखोजे हुन्छ । जब गणतन्त्रमा संकट आउँछ लाखौ मान्छे कफन बाधेंर सडकमा आउछन ।
लेखक : लामो समयदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा क्रियाशील छन् ।
यस्तो दयालाग्दो अवस्था कसरी बन्यो, हे प्रचण्ड ?
ठूलाठूला दर्शन र आदर्शको अपुरो र झ्यालि भाषण गर्ने दल…
चितवन घटना : न प्रचण्डले मुख खोले न ओलीको बोली फुटयो !
चितवनको लोथरमा भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एक कार्यक्रमका…
यसकारण गुम्दैछ नेकपाप्रति विश्वास
प्रचण्डले बैठकमा प्रस्तुत गरेको आरोपपत्र निःशर्त फिर्ता लिनुपर्छ
बडाहरुको बिचित्र र वैचारिक भ्रस्टाचार
फराकिलो बन्दै गएको सेयर बजार र सरोकारवाला निकायको साँघुरिंदै गएको नियत